श्रावण ४, २०७६ ०३:४१:५५
करेन्ट लागेर सुनसरी र मोरङमा दुईको मृत्यु श्रावण १, २०७६
लामो समय सम्म प्रेम विबाह किन टिक्दैन ? जानिराखौ यस्ता छन् कारण श्रावण १, २०७६
सुबिधा सम्पन्न हुदैछ हेटौंडा अस्पताल, अब कल्चरको रिपोर्ट ६ घन्टामै निस्किन्छ श्रावण १, २०७६
दयाहाङ र उपासनाको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ हिट होला ? आउँदो भदौ १३ गतेदेखि चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ प्रदर्शनमा आउने चर्चा छ । निर्माण टिमले यही मितिमा फिल्म रिलिज गरिने संकेत गरेको छ । वर्षकै प्रतीक्षित यो फिल्मको टिजर केही हप्ताअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । श्रावण १, २०७६
हङकङमा नम्रताको विकिनी अवतार (७तस्वीरसहित ) नायिका नम्रता सापकोटाले हङकङमा मस्ती गरेका तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सामुद्रिक छालमा उनी विकिनी अवतारमा निकै बोल्ड देखिएकी छिन् । हालै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना हट तस्विर शेयर गरेकी हुन्। श्रावण १, २०७६
आठ मिनेटको दृश्यका लागि ७० करोड खर्च ! बाहुबली फिल्मका स्टार प्रभास र बलिउड नायिका श्रद्धा कपूर एउटै फिल्ममा देखिंदैछन् । भारतीय फिल्म ‘साहू’ मा यो जोडीको एकसाथ देखिँदैछन् । श्रावण १, २०७६
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीकाे मूल्य बढ्याे आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को पहिलो दिन आज (बुधवार) छापावाल सुनको भाउ तोलामा ६४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सुन आज हिजाेकै मुल्यमा कारोबार भएकाे हाे । श्रावण १, २०७६
खोलामा डुबेर एक बालकको ज्यान गयो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा खोलामा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ । श्रावण १, २०७६
१२ वर्षमा यति परिवर्तन भए आमिर खानको फिल्मका यी बाल कलाकार आमिर खानद्वारा अभिनित फिल्म ‘तारे जमिन पर’ का बाल कलाकार दर्शिल सफारी अब ठूलो भइसकेका छन् । उनले त्यसपछि पनि एउटा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । सन् २००७ मा रिलिज भएको फिल्म तारे जमिन परमा आमिर खानबाहेक दर्शिलको कामको पनि निकै तारिफ भएको थियो । दर्शिलले फिल्ममा डिसलेक्सिक बच्चाको भूमिका निभाएका थिए । श्रावण १, २०७६
काँक्रो खाँदा पत्थरी हुने सम्भावना कम, यस्ता छन् अन्य फाइदा काँक्रोमा ९० प्रतिशत पानी हुने भएकाले काँक्रो खानु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । काँक्रोमा पाइने क्याल्सियम, फोस्फोरस, सोडियम तथा म्यग्रसियमले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । श्रावण १, २०७६
महोत्तरीमा एक व्याक्ति मृत फेला महोत्तरीमा एक व्याक्ति मृत फेला परेका छन् । जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडाका ३६ वर्षीय श्रवण थापा विपी राजमार्ग (बर्दिवास–सिन्धुली–बनेपामार्ग) को बर्दिवास–३ गौरीडाँडाको स्मृतिपार्क नजिकै मङ्गलबार मध्यरातमा मृत फेला परेका हुन् । श्रावण १, २०७६
पानी पिउने यो नियम अपनाउनुस्, हुनेछ मिर्गौला स्वस्थ आयुर्वेदमा पानी पिउने सही समय र मात्राको उल्लेख पाइन्छ । सही समय र मात्रामा पानी पिउँदा त्यसले औषधिको काम गर्छ । श्रावण १, २०७६
बाढीको कारण त्रियुगा नदीको पुल भत्कन थाल्यो पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको कदमाहा हुँदै उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट जोड्ने गाईघाट– कदमाहा सडकखण्डअन्तर्गत गाईघाटको त्रियुगा नदीको पक्की पुलको पूर्वी भाग केही दिनअघि आएको निरन्तर वर्षा र बाढीका कारण अहिले भत्कन थालेको छ । श्रावण १, २०७६
विश्वकपका बेला इन्जेक्सन लगाइरहेका थिए इङ्गल्याण्डका यी खेलाडी आइसीसी क्रिकेट विश्वकप २०१९ मा इङ्गल्याण्डलाई विश्वकप जिताउन जोफ्रा आर्चरको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । आर्चरले आफ्नो ‘फास्ट बलिङ’ को दममा ११ म्याचमा २० विकेट हाँसिल गरे । उनी इङ्गल्याण्डका सबैभन्दा सफल बलर प्रमाणित भए । यद्यपि, इङ्गल्याण्डको च्याम्पियन बनेपछि उनीबारे केही कुरा खुलासा भएको छ । श्रावण १, २०७६
बन्दुकसहित अवैध चोरी शिकार गर्ने तीन जना पक्राउ अवैध चोरी शिकारको आरोपमा तीन पक्राउ परेका छन् । जङ्गली जनावर चित्तलको शिकार गरी लुकाइछिपाई राखेको अवस्थामा एकनाले बन्दुकसहित श्यामलाल थारूलाई पक्राउ गरिएको छ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–१० लम्कीफाँटा बस्ने थारूले जङ्गली जनावर चित्तलको शिकार गरी लुकाइछिपाई राखेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय ठाकुरद्वारा बर्दियाबाट खटिई गएको संयुक्त टोलीले घर खानतलासी गर्दा निजको घरबाट उक्त वस्तु फेला परेको हो । श्रावण १, २०७६